हरि थापा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ! तपाईं सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र स..
लक्ष्मण खनाल “बाबु मैले एउटा अभियान चलाउने भने सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्नु पर्यो ।” “कस्त..
खेमराज अवस्थी आजका मितिसम्म सबै नेपालीलाई नगर तथा गाउँपालिका निर्वाचनले छोइसकेको छ । राजनी..
खेमराज अवस्थी आज पmेरि चारजना नेपालीको आफ्नै कर तिरेकोे पैँसाले किनेको बन्दुकले ज्यान लिएक..
मणिकुमार श्रेष्ठ सिजन नेकपा एमालेले २०७३ फागुन २१ गतेबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियानका बारेमा विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । जतिजति एमालेको अभिायनले तीव्रता पाइरहेको छ त्यतित्यति नै यसले चर्चा बटुल्ने काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा २३ गते सोमबारका दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुनसरीको इनरुवामा सधैँ लागाइरहने..
–जयश्वर रिमाल हाम्रो समाजमा निरन्तर हुने मानवीय संवेदनाविरुद्ध थुप्रै घटनाहरु छन् । यसलाई अहिलेसम्म अपराधको परिभाषाले समेट्न सकेको छैन । कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने यस्ता घटनाका सम्बन्धमा कहीँ कतैबाट सम्बोधन भएको पाइँदैन । यस्तै घटनामध्येको एउटा घटना हो– घरधनीले डेरावालसँग गर्ने अमानवीय व्यवहार । साहित्यकार अमर न्यौपानेले ल..
शिक्षित वर्गमा कायम जातीय भेदभाव
विवश ‘यात्री’ मनुस्मृतिद्वारा सिर्जित हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा जातमा आधारित व्यवहारले करिब ३५०० वर्षदेखि नै दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रभाव पार्दै आएको छ । नेपालका सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लकले कामका आधारमा चार वर्ण अठार जातका विभाजन गरी विभेदको खाडल निर्माण गरे भने राम शाहले चार वर्ण भएको घोषणा गरी सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति दिए प..
खगेन्द्र फुयाँल नेपालमा प्रजातन्त्र अगाडिको पत्रकारिताका विषयमा खासै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छैन । २००७ साल अगाडिको समयलाई पत्रकारितको इतिहासका रुपमा उठान गरेको पाइँदैन । तर नेपालको इतिहासमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि नेपाली पत्रकारिताले थुप्रैै उतारचडाव बेहोर्नु परेको थियो । नेपालमै छापिएर प्रकाशन भएको ने..
देशको राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नरहेर अर्धसामन्तीको ठाउँ दलालपुँजीवादले र अर्धऔपनिवेशिकको ठाउँ नवऔपनिवेशिकवादले लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवाद पनि अहिले भूमन्डलीकृत पुँजीवादमा रूपान्तरित भएको छ । त्येसैले नेपालमा दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोध प्रमुख बनिरहेको छ । यता नेपाली राजनीतिम..
प्राविधिक शिक्षामा समान पहुँच स्ववियुको प्रमुख मुद्दा
झन्डै एक दशकसम्म हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी फागुन १८ मा गर्ने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेसँगै अहिले क्याम्पसहरुमा चुनावी माहोल बढेको छ । विद्यार्थीहरुको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अनेक आन्दोलनका परिमाण स्वरुप यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्तो साझा मञ्चको निर्माण भई २०३६ सालबाट यसको अभ..
कुलवीरले यूएईबाट भने : बन्दुक बोक्न भुलेको छैन
कुमार शर्मा केही वर्षअघि यूएईबाट एकजना पत्रकार एक अनलाइन पोर्टलमा नियमित लेख लेख्नेगर्थे । उनी जनमुक्ति सेनाका पूर्व लडाकु थिए । उनका लेख रचनाहरुमा अधिकांश शब्दहरु माओवादीलाई गाली गर्न खर्चिएको हुन्थ्यो । ती लेख रचनाहरुलाई माओवादीइतरका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा खुबै सेयर हुन्थे । माओवादी र माओवादी नेता विशेष गरी प्रचण्डलाई ग..
दीपक घिमिरे मेरो घर थारु बाहुल्य इलाकामा पर्छ । मेरा बाआमाका सुख दुःखका साथी भनेका तिनै थारु जातिका बुदु र बुदी हुन् । बुदु भनेको बाजे र बुदी भनेको बोई हो । मेरा दोस्तीमा पनि धेरैजसो थारु नै छन् । हामी मेलापात गर्दा होस् या स्कुल कलेज जाँदा थारु केटाकेटीसँगै गयांै । स्कुलमा […]
माओवादी नेताहरूले गर्न चाहे भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ
विगत १०१२ वर्षदेखि नेपाललाई अन्धकारमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही कमिशनखोर कर्मचारीहरूले लूट मच्चाए । व्यापारीहरूसँग मिलेर कमिशन खाने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू दण्डित नहुने हो भने यो प्रवृत्तिले भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । नेपाललाई लोडसेडिङमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि कमिशनको लोभम..
सविता सापकोटा मिस यु । मिस यु टु । अन्तिम म्यासेज । आजसम्म उसले डियर भन्ने आँट गरेको छैन । मेरो एउटा स्टाटस देखेपछि उसलाई डियर भन्न डर लाग्छ रे । मनमा के छ त्यो त म बुझ्न सक्दिनँ, तर पनि उसले दिनहुँ गर्ने कुराकानीमा कहिकतै मनमा मायाको भाव लुकेको छ कि जस्तो लाग्छ । […]
बालकृष्ण गौतम प्रिय …. साथीले भने जस्तै, तिमी जसरी आयौ, त्यसरी नै गयौ, भ्यालेन्टाइन डे कै दिन आयौ भ्यालेन्टाइन डे कै दिन छुट्टियौ । मसँग दुई बर्ष नाता गास्यौँ दुई पटक भेट्यौँ सारा सपना देख्यौँ र देखायौ । सुरुमा तिमीले मलाई प्रस्ताव राख्दा मैले यो सम्भव छैन् भने तर् तिमीले छ भन्यौ । मध्यान्तरमा आउँदा […]
हाम्रो स्वाधीनता यसरी खोसिँदैछ
विष्णुकुमार प्रसाईं अहिले छैन । विज्ञानको अकल्पनीय प्रगति, चेतनाको स्तरमा व्यापक वृद्धि, संसार एकअर्कामा नजिकसँगै सामरिक प्रतिस्पर्धा तथा कतिपय राष्ट्रमा भएको परमाणु क्षमताको विकासले गर्दा झट्ट सेना पठाएर झाटझुट अर्को राष्ट्रलाई कब्जामा लिने स्थिति छैन । कसैले त्यस्तो नीति अपनायो भने अर्को राष्ट्रको सम्बन्धका कारण आक्रमणकारी राष..
जुना घर्ती मगर नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना संविधान सभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने काम पूरा भएको छ । तर यो काम यति सजिलै भएको होइन । यसमा धेरै नेपालीले जीवनको आहुती दिएका छन् । कैयौँ अझै पनि बेपत्ता छन् । कैयौँ शरीरिक तथा मानसिक अपाङ्ग छन् । नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निमार्ण गर्नुपर्छ भन्ने पटक […]
गरिबीको भुमरीमा अवसरको खाँचो
पुस–माघको तुसारो र शीतमा कठ्याङ्ग्रिँदै नाकमा सिँगान बोकेर पुरानो, मैलो बख्खु लगाएको बालक गाईवस्तुको स्याहार गर्दै गर्दा आगोमा फालहाल्न चाहन्छ तर बाध्यता छ, उसको दैनिकी त्यही हो । दुई हातलाई काखीमुनि च्यापेर जाडो छेक्न चाहन्छ, आफ्नै मुखबाट निस्केको तातो बाफले ठिहिर्याएको हात सेक्न बानी परेको हुन्छ, उसलाई । राष्ट्रियतासँग हक र अध..
जन्मभूमिप्रतिको माया, समग्र राष्ट्रको प्रगति लगायत समाजका विविध पक्षको विकास चाहानु नै राष्ट्रवाद हो । राष्ट्रवाद भौतिक वस्तु नभएर भावनात्मक संवेग हो । पछिल्लो समय राष्ट्रवाद बारे विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । सबैले राष्ट्रवादको विषयमा बहस गरिरहेका छन् । देशको विषयमा प्रत्येक नागरिकले चासो राख्नु देशप्रेमी व्यक्तिहरुका लागि खुशीक..
रमेश दवाडी विभिन्न अध्ययनकाले राजधानी काठमाडौँ एसियाको पहिलो र विश्वको तेस्रो प्रदूषित सहर भनेका छन् । नाङ्गो आँखाले समेत यहाँको वायुमण्डल निकै धमिलो देखिन्छ । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका मानिसले आँखा पिरो हुने, चिलाउने, घाँटी खसखसाउने जस्ता समस्या राजधानीवासीले भोगिरहेका छन् । काठमाडौँमा अधिकांशले मुखमा मास्क लगाएर हिँडिरहेक..
स्ववियु निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने गम्भीर मुद्दाहरु
दुई महिनाअघि काठमाडौँ जाने क्रममा गाडीको पछिल्लो सिटका यात्री जसलाई मैले अलिअलि चिनेको थिएँ । बोलचालकै प्रसङ्गमा उनले भने– ‘के गर्नु सर, अरु क्याम्पसमा छोरा पढाऊँ भने राजनीतिले बिग्रेला भनेर काठमाडौँमा प्राइभेट कलेजमा पढाउनु पर्यो भनेर हिँडेको, साह्रै महँगो फिस छ भन्छन् ।’ मैले जिज्ञासा राखेँ– ‘कसले भन्यो तपाईंलाई प्राइभेटबाहेक ..
परदेशी हुँदैमा राष्ट्रियता विर्सिंदैन
एउटा वर्ग नेपाललाई शब्दमा मात्र निकै माया गर्छ र बिहान बेलुका नेताको गुलामी गर्छ । नेताको घर चाहारेर हातमुख जोड्छ । पार्टीको लाइनअनुसार आन्दोलन गर्छ, राजनीति गरेर विकास गर्ने होइन राजनीतिक मुद्दा गराएरै विकास रोक्ने काम गर्छ । अर्कोतार्फ देशको माया गर्नेले विदेश जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । नेपालमै केही गर्नुपर्छ त भन्छन्..
सरोज भण्डारी संविधान निर्माण भइसकेको छ । राजनीतिक आन्दोलनको एक युग सकिएको छ । अब आर्थिक क्रान्तिको नयाँ चरण प्रारम्भ भइसकेको छ । देशको हरेक राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र सरोकारवाला सबै आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर मोडिनुपर्ने आवाश्यकता छ । आर्थिक क्रान्तिको दिशातिर उन्मुख हुने हो भने विकासका निम्न अवधारणालाई ध्यान दिनैपर्छ ः क. कानुन,..
कथा : भूकम्पमा गुरूका वचन
छिपछिपे नै सही, उनी सबै कुराको ज्ञान राख्दछन् । जुनसुकै विषयवस्तुमा पनि भाषण छाँट्न सक्छन् । यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्न सक्छन् । भाषण गर्ने मामिलामा उनी हाम्रो देशका मन्त्रीभन्दा कम छैनन्, उनका कुरा सुन्दा उनले नजानेको र नबुझेको केही छैन जस्तो लाग्छ्र । राजनीतिप्रतिको उनको रुचि र दलमा उनको आबद्धता हेर्दा भविष्यमा उनी मन्त..
मैले एक प्याक अरु थप्ने निधो गरेँ । सँगै पिउँदै गरेको केरलाको रफिकले मेरो भोड्काको बोतल आफूतिर सार्दै भन्यो ‘कितना पिएगा बे ? मरेगा तु !’ मेरा आँखा आलु जत्रा भए, गोलभेँडा जस्ता भए । रफिकको हातबाट बोतलतान्दै मैले भने– ‘तुझे क्या मुस्किल हे बे ? मे मेरा पिता हुँ, तेरा नही ।’ म हल्का […]